प्रत्येक प्रदेशलाई ७५ हजार प्रदान गर्दै राष्ट्रिय युवा सम्मेलन सम्पन्न - Experience Best News from Nepal
प्रत्येक प्रदेशलाई ७५ हजार प्रदान गर्दै राष्ट्रिय युवा सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा नेपाल यूवा परिषदले आयोजना गरेको ३ दिने राष्ट्रिय युवा सम्मेलन २०१८ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ ।
Safe Spaces for youth and transferming Nepal: Youth Leadership and Innovation भन्ने मुल नाराको साथ सम्पन्न युवा सम्मेलनमा ७७ वटै जिल्लाबाट २ सय ४ जना युवाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
युएन नेपालसँगका मुख्य सहकार्यमा आयोजित सम्मेलनमा कृषि, पर्यटन, सुचना प्रबिधि र युवा उद्यमशिलता बिषयमा बिभिन्न विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर सहभागिहरुसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेका थिए । सहरी बिकास मन्त्री मोहमद इश्तियाक राईबाट उद्घाटन गरिएको सम्मेलनको अन्तिम दिन प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना तयार पारिएको थियो ।
३ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा कोकाकोलाले प्रदेशस्तरीय कार्ययोजनाहरुमध्ये एक उत्कृष्ट कार्ययोजनालाई बीउ पूँजी स्वरुप ७५ हजार प्रदान गरेको थियो । सहभागि युवाहरुले आ–आफ्नो प्रदेशस्तरिय सात सात वटा कार्ययोजना तयार पारेका थिए ।
निर्णायक समितिले प्रत्येक प्रदेशबाट उत्कृष्ट एक एक वटा कार्ययोजना छानेका थिए । त्यसमध्ये प्रदेश नं १ मा तनाव ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्ययोेजना छनोट भएको छ । त्यसैगरि प्रदेश नं २ को लागि ४० जना युवाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा स्वरोजगार तालिम दिने योजना छनोट भएको छ ।
प्रदेश नं ३ को लागि फोहोरमैला ब्यबस्थापन गरि उद्यमशिलताको ब्यबस्था गर्ने योजना छनोट भएको भने प्रदेश नं. ४ को लागि १ सय १० किशोरकिशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि तालिम दिने कार्ययोजना छनोट भएका छ ।
प्रदेश नं. ५ मा उद्यमशिलता तथा प्राबिधिक शिक्षा कार्यक्रम छनौट भएको छ । जसले गरिबी निवारण, आत्मनिर्भरता र उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन पर्दछ ।
प्रदेश नं ६ कर्णालीको लागि त्यहाँको स्थानिय खाद्यान्नको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र प्रदेश नं ७ को लागि पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा गर्नको लागि त्यस्ता स्थानको पहिचान गरि सामाजिक संजालमा राख्ने तथा यससंग सम्बन्धित वेबसाइट बनाउन युवालाई तालिम दिने योजना समावेश गरिएको छ ।
हरेक वर्ष यूवा सम्मलेन आयोजना गर्दै आएको नेपाल यूवा परिषदले यूवा उद्यमशीलता र यूवाहरुमा नेतृत्व विकासका लागि कार्य गर्दै आएको छ । यो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै समुन्नत समाज निर्माणमा क्रियाशील रहने नेपाल यूवा परिषदका अध्यक्ष सरोज बानियाँले जानकारी दिए ।